တရုတ် ဝယ်လိုအားကြောင့် မလေးရှားတွင် ဒူးရင်းပင်များ အများအပြား စိုက်ပျိုး
Post byကွာလာလမ်ပူ၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ on Tuesday, December 04,2018
ဓာတ်ပုံ- daily express
ကွာလာလမ်ပူ၊ ဒီဇင်ဘာ ၄
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်လိုအား မြင့်မားလာသောကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံသည် ဒူးရင်းဧက ထောင်ပေါင်းများစွာ တိုး ချဲ့စိုက်ပျိုးလာရာ ဒူးရင်းသီးသည် နောင်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အဓိကပို့ကုန် ဖြစ်လာတော့မည် ဖြစ်သည်။
ယခင်က မိသားစုပိုင်ခြံဝင်းထဲတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးခဲ့သော ဒူးရင်းသီးပင်များသည် ယခုအခါတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများကို ယခင်ကထက် အများအပြား စွဲဆောင်နေသည်။
အိမ်ခြံမြေလုပ် ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် ဆီအုန်းကုမ္ပဏီကြီးများပင်လျှင် ဒူးရင်းစိုက်ပျိုးရေး ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရန် စဉ်းစားနေကြသည်။
မလေးရှားအစိုးရသည် အကြီးစားဒူးရင်း စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အားပေးနေပြီး လာမည့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာရန် ရည်မှန်းထားသည်။
“ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ဝယ်လိုအား ကောင်းတာကြောင့် ဒူးရင်းလုပ်ငန်းဟာ ဒေသအဆင့်ကနေ ကမ္ဘာ့အ ဆင့်ကို ပြောင်းလဲလာနေတယ်။ ဒီလို အခြေအနေ မတိုင်ခင်မှာဆိုရင် မလေးရှားနိုင်ငံက ဒူးရင်းလုပ်ငန်းတွေ ဟာ အပျော်တမ်းစိုက်တဲ့ သဘောမျိုးပဲ။ အခုတော့ ဧကရာပေါင်းများစွာ ရှိလာပြီး ကြီးလာတယ်။ နောက်ကျရင် လည်း ပိုဝင်လာဖို့ရှိတယ်” ဟု ဒူးရင်းလုပ်ငန်းအကြံပေး လင်ချင်ခီးက ပြောသည်။
အနံ့ပြင်းသဖြင့် ဒူးရင်းသီးကို လေဆိပ်များ၊ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နေရာများတွင် သယ်မလာရန် ပိတ်ပင်ထားသည်။ သို့သော် တရုတ်တို့က ဒူးရင်းသီးကို အလွန်ကြိုက်ကြသည်။
ဒူးရင်းအရသာနှင့် ပြုလုပ်ရောင်းချသော အစားအစာများတွင် ပီဇာ၊ ထောပတ်၊ အသုပ်နှင့် နို့တို့လည်း ပါဝင် သည်။
“ အစပိုင်းမှာ အနံပြင်းလို့ ကျွန်မလည်း မကြိုက်ဘူး။ စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ တော်တော် အရသာရှိတယ်။ ဒူးရင်းကို မကြိုက်တဲ့လူတွေက အနံ့ကို မကြိုက်ကြတာ ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့်တော့ စားကြည့်လိုက်ရင် ကြိုက် သွားကြမယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ဟယ်လင်လီက ရှန်ဟိုင်းရှိ ဒူးရင်းပီဇာဆိုင်တွင် ပီဇာ စားရင်းပြောသည်။
ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်းချိန်များတွင်ဆိုလျှင် စားသုံးသူများမှာ ယွမ် ၆၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ဒသမ၅၀) ကျသင့် သော ပီဇာများကို မှာယူစားသုံးတတ်ကြသည်။
ရှန်ဟိုင်းရှိ အခြားသော စားသောက်ဆိုင်တွင်လည်း ဒူးရင်းကြက်သာဟော့ပေါ့ကို ရောင်းချပေးနေပြီး တစ်ပွဲလျှင် ယွမ် ၁၄၈ ယွမ် (အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂၁) ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချနေသည်။ အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်မှာ တစ် လလျှင် ထိုင်းဒူးရင်းသီး ကီလိုဂရမ် ၂၀ မှ ၂၅ ကီလိုဂရမ်အထိ ရောင်းချရကြောင်း ပိုင်ရှင် ချန်ဝေဟိုက ပြော သည်။
ဒူးရင်းသီး တင်သွင်းမှုမှာလည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တက်လာရာ ပမာဏအားဖြင့် တန်ချိန် သုံးသိန်းခွဲ၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၁၀ သန်း ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်များ အရ သိရသည်။
တင်ပို့မှု စုစုပေါင်း၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်တင်ပို့နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒူးရင်းသီး အများဆုံး ထုတ်လုပ်တင်ပို့နေသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဒူးရင်းသီး ထုတ်လုပ်တင်ပို့မှုမှာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ရှိသေးပြီး၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မှုသည် တန်ချိန် ၂၂,၀၆၁ အထိ တိုးမြင့်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ယခုနှစ်တွင် ဒူးရင်းပင်များ စတင်စိုက်ပျိုးနေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ဆီအုန်းကုမ္ပ ဏီ ဖယ်လ်ဒါက ပြောသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆီအုန်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ပီအယ်လ် ပလန့်တေးရှင်းက ယင်းအနေဖြင့် ဒူးရင်းသီး တင် ပို့နေသောလုပ်ငန်းတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်း ရှယ်ယာဝယ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထူထောင်ခဲ့သော M7 Plantation Bhd က ဒူးရင်းဧကပေါင်း တစ်သောင်းခန့် စိုက်ပျိုးနေပြီး ဒူး ရင်းပင် တစ်ပင်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၂၀ဝ ဖြင့် ရောင်းချနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဒူးရင်းပင် စိုက်ပျိုးထားရှိမှုမှာ ဟက်တာပေါင်း ၇၂,၀ဝ၀ ရှိခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးနေဆဲ ဧရိယာပမာဏမှာလည်း တိုးပွားနေကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထား သည်။
ကှာလာလမျပူ၊ ဒီဇငျဘာ ၄
တရုတျနိုငျငံမှ ဝယျလိုအား မွငျ့မားလာသောကွောငျ့ မလေးရှားနိုငျငံသညျ ဒူးရငျးဧက ထောငျပေါငျးမြားစှာ တိုး ခြဲ့စိုကျပြိုးလာရာ ဒူးရငျးသီးသညျ နောငျတှငျ မလေးရှားနိုငျငံ၏ အဓိကပို့ကုနျ ဖွဈလာတော့မညျ ဖွဈသညျ။
ယခငျက မိသားစုပိုငျခွံဝငျးထဲတှငျ တဈပိုငျတဈနိုငျ စိုကျပြိုးခဲ့သော ဒူးရငျးသီးပငျမြားသညျ ယခုအခါတှငျ ရငျးနှီး မွှုပျနှံမှုမြားကို ယခငျကထကျ အမြားအပွား စှဲဆောငျနသေညျ။
အိမျခွံမွလေုပျ ငနျးရှငျကွီးမြားနှငျ့ ဆီအုနျးကုမ်ပဏီကွီးမြားပငျလြှငျ ဒူးရငျးစိုကျပြိုးရေး ဈေးကှကျသို့ ဝငျရောကျ လုပျကိုငျရနျ စဉျးစားနကွေသညျ။
မလေးရှားအစိုးရသညျ အကွီးစားဒူးရငျး စိုကျပြိုးရေး လုပျငနျးမြားကို အားပေးနပွေီး လာမညျ့ ၂၀၃၀ ခုနှဈတှငျ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိ တိုးတကျလာရနျ ရညျမှနျးထားသညျ။
“ တရုတျနိုငျငံဘကျက ဝယျလိုအား ကောငျးတာကွောငျ့ ဒူးရငျးလုပျငနျးဟာ ဒသေအဆငျ့ကနေ ကမ်ဘာ့အ ဆငျ့ကို ပွောငျးလဲလာနတေယျ။ ဒီလို အခွအေနေ မတိုငျခငျမှာဆိုရငျ မလေးရှားနိုငျငံက ဒူးရငျးလုပျငနျးတှေ ဟာ အပြျောတမျးစိုကျတဲ့ သဘောမြိုးပဲ။ အခုတော့ ဧကရာပေါငျးမြားစှာ ရှိလာပွီး ကွီးလာတယျ။ နောကျကရြငျ လညျး ပိုဝငျလာဖို့ရှိတယျ” ဟု ဒူးရငျးလုပျငနျးအကွံပေး လငျခငျြခီးက ပွောသညျ။
အနံ့ပွငျးသဖွငျ့ ဒူးရငျးသီးကို လဆေိပျမြား၊ အမြားပွညျသူ သယျယူပို့ဆောငျရေး နရောမြားတှငျ သယျမလာရနျ ပိတျပငျထားသညျ။ သို့သျော တရုတျတို့က ဒူးရငျးသီးကို အလှနျကွိုကျကွသညျ။
ဒူးရငျးအရသာနှငျ့ ပွုလုပျရောငျးခသြော အစားအစာမြားတှငျ ပီဇာ၊ ထောပတျ၊ အသုပျနှငျ့ နို့တို့လညျး ပါဝငျ သညျ။
“ အစပိုငျးမှာ အနံပွငျးလို့ ကြှနျမလညျး မကွိုကျဘူး။ စားကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ တျောတျော အရသာရှိတယျ။ ဒူးရငျးကို မကွိုကျတဲ့လူတှကေ အနံ့ကို မကွိုကျကွတာ ဖွဈမယျ။ ဒါပမေယျ့တော့ စားကွညျ့လိုကျရငျ ကွိုကျ သှားကွမယျလို့ ထငျတယျ” ဟု အသကျ ၂၆ နှဈအရှယျ ဟယျလငျလီက ရှနျဟိုငျးရှိ ဒူးရငျးပီဇာဆိုငျတှငျ ပီဇာ စားရငျးပွောသညျ။
ရုံးတကျ၊ ရုံးဆငျးခြိနျမြားတှငျဆိုလြှငျ စားသုံးသူမြားမှာ ယှမျ ၆၀ (အမရေိကနျဒျေါလာ ၈ဒသမ၅၀) ကသြငျ့ သော ပီဇာမြားကို မှာယူစားသုံးတတျကွသညျ။
ရှနျဟိုငျးရှိ အခွားသော စားသောကျဆိုငျတှငျလညျး ဒူးရငျးကွကျသာဟော့ပေါ့ကို ရောငျးခပြေးနပွေီး တဈပှဲလြှငျ ယှမျ ၁၄၈ ယှမျ (အမရေိ ကနျဒျေါလာ ၂၁) ဒျေါလာဖွငျ့ ရောငျးခနြသေညျ။ အဆိုပါ စားသောကျဆိုငျမှာ တဈ လလြှငျ ထိုငျးဒူးရငျးသီး ကီလိုဂရမျ ၂၀ မှ ၂၅ ကီလိုဂရမျအထိ ရောငျးခရြကွောငျး ပိုငျရှငျ ခနျြဝဟေိုက ပွော သညျ။
ဒူးရငျးသီး တငျသှငျးမှုမှာလညျး ပွီးခဲ့သညျ့နှဈကထကျ ၁၅ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ တကျလာရာ ပမာဏအားဖွငျ့ တနျခြိနျ သုံးသိနျးခှဲ၊ တနျဖိုး အမရေိကနျဒျေါလာ ၅၁၀ သနျး ရှိကွောငျး ကုလသမဂ်ဂ ကုနျသှယျမှုအခကျြအလကျမြား အရ သိရသညျ။
တငျပို့မှု စုစုပေါငျး၏ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးမှာ ထိုငျးနိုငျငံမှ ထုတျလုပျတငျပို့နခွေငျး ဖွဈသညျ။ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ဒူးရငျးသီး အမြားဆုံး ထုတျလုပျတငျပို့နသေညျ့နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
လကျရှိ မလေးရှားနိုငျငံ၏ ဒူးရငျးသီး ထုတျလုပျတငျပို့မှုမှာ ၁ ရာခိုငျနှုနျးအောကျသာ ရှိသေးပွီး၂၀၃၀ ခုနှဈတှငျ တရုတျနိုငျငံသို့ တငျပို့မှုသညျ တနျခြိနျ ၂၂,၀၆၁ အထိ တိုးမွငျ့လာမညျဟု မြှျောလငျ့ထားသညျ။
စိုကျပြိုးရေးဝနျကွီးဌာနသညျ ယခုနှဈတှငျ ဒူးရငျးပငျမြား စတငျစိုကျပြိုးနပွေီဖွဈကွောငျး နိုငျငံပိုငျ ဆီအုနျးကုမ်ပ ဏီ ဖယျလျဒါက ပွောသညျ။
ဆောကျလုပျရေးနှငျ့ ဆီအုနျး စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျး ပီအယျလျ ပလနျ့တေးရှငျးက ယငျးအနဖွေငျ့ ဒူးရငျးသီး တငျ ပို့နသေောလုပျငနျးတှငျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅ သနျး ရှယျယာဝယျယူသှားမညျဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့နှဈက ထူထောငျခဲ့သော M7 Plantation Bhd က ဒူးရငျးဧကပေါငျး တဈသောငျးခနျ့ စိုကျပြိုးနပွေီး ဒူး ရငျးပငျ တဈပငျလြှငျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁,၂၀ဝ ဖွငျ့ ရောငျးခနြသေညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ နိုဝငျဘာလအတှငျး မလေးရှားနိုငျငံ၏ ဒူးရငျးပငျ စိုကျပြိုးထားရှိမှုမှာ ဟကျတာပေါငျး ရ၂,၀ဝဝ ရှိခဲ့ပွီး စိုကျပြိုးနဆေဲ ဧရိယာပမာဏမှာလညျး တိုးပှားနကွေောငျး မလေးရှားနိုငျငံ စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတျပွနျထား သညျ။
My spouse and i have been now lucky Louis could deal with his investigations via the ideas he was given in your weblog. It's not at all simplistic to simply possibly be giving freely guidance which usually people have been trying to sell. And we grasp we need the website owner to be grateful to because of that. All the illustrations you made, the simple website navigation, the relationships your site make it possible to engender - it is many terrific, and it's making our son in addition to our family believe that that situation is brilliant, and that's truly indispensable. Thanks for the whole lot! hermes handbags
by cyqhdvza@gmail.com at June 10 2019
A lot of thanks for each of your labor on this blog. My mom take interest in getting into internet research and it's simple to grasp why. We know all regarding the powerful way you deliver informative thoughts via the web blog and as well as boost contribution from website visitors on this area then our own simple princess is truly studying so much. Take advantage of the rest of the year. You're carrying outasuperb job. kobe byrant shoes
by bipwry@gmail.com at June 09 2019
I simply needed to appreciate you once more. I'm not certain what I could possibly have tried in the absence of the entire smart ideas discussed by you relating to this topic. It had beenascary matter in my circumstances, nevertheless spending time with this professional style you solved that forced me to cry over contentment. Extremely thankful for your guidance as well as hope you find out whatagreat job you are carrying out instructing others via your website. Probably you have never met all of us. gucci belts [url=http://www.guccibelt.us.com]gucci belts[/url]
by exogpgmrqjj@gmail.com at June 06 2019
My spouse and i got quite fortunate when Jordan could round up his web research through the entire precious recommendations he discovered while using the web site. It is now and again perplexing to simply choose to be releasing secrets which often many people have been making money from. Therefore we understand we now have you to thank because of that. All of the explanations you made, the easy website navigation, the friendships you can give support to instill - it's got many spectacular, and it's making our son and us consider that the content is entertaining, which is wonderfully pressing. Many thanks for the whole thing! yeezy boost
by awwcdsp@gmail.com at June 06 2019
I wanted to constructasmall note in order to thank you for those nice recommendations you are showing at this site. My time intensive internet investigation has finally been compensated with sensible ideas to write about with my family members. I would tell you that many of us site visitors actually are unquestionably lucky to dwell inawonderful place with many marvellous professionals with very helpful opinions. I feel really happy to have seen your entire webpages and look forward to some more enjoyable minutes reading here. Thanksalot again for everything. ferragamo belt
by qyurcvgn@gmail.com at June 05 2019
I'm just writing to make you be aware of of the impressive discovery our princess enjoyed studying yuor web blog. She even learned several details, which include what it's like to have an awesome teaching style to let other folks easily grasp specific tortuous topics. You really exceeded our own expectations. Thank you for rendering such great, dependable, informative and also fun tips on your topic to Jane. yeezy boost 350
by pziuzrpz@gmail.com at June 05 2019
I intended to send you the little bit of remark so as to thank you very much over again just for the magnificent thoughts you have contributed in this article. It's certainly wonderfully generous of people like you to give unhampered precisely what some people could possibly have advertised for an e-book in making some cash on their own, even more so considering the fact that you could possibly have done it in case you desired. These strategies as well worked to provideagood way to know that other individuals haveasimilar dreams much like my very own to see good deal more on the subject of this issue. I know there arealot more pleasant occasions ahead for many who read your website. curry 5
by xrfpww@gmail.com at June 03 2019
I would like to get across my gratitude for your kindness in support of persons who really need help on in this topic. Your personal commitment to getting the solution up and down had become remarkably good and have enabled most people like me to attain their endeavors. Your new warm and helpful instruction impliesalot to me and further more to my office colleagues. Thank you; from everyone of us. michael kors outlet
by wjoqtzfqdvh@gmail.com at June 01 2019
My wife and i were absolutely fortunate when Emmanuel managed to carry out his web research through the entire precious recommendations he received through your blog. It's not at all simplistic to just choose to be freely giving tips and tricks that most people might have been selling. And we all consider we now have the website owner to give thanks to for that. These illustrations you have made, the easy website menu, the relationships you can make it easier to foster - it's everything fabulous, and it's really letting our son in addition to us understand that idea is satisfying, which is highly important. Thanks for everything! golden goose
by golden goose at May 30 2019
I in addition to my pals were found to be looking through the great tactics from your website and so at once developed an awful suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. My people had been asaresult passionate to study them and have honestly been using these things. Thanks for turning out to be so kind and then for going for some fabulous subject areas millions of individuals are really desperate to know about. My very own sincere regret for not saying thanks to you earlier. yeezy boost
by yeezy boost at May 28 2019